प्रवासमा अवैधानिक संस्थाहरु : सुनको अण्डा पार्ने कुखुरी !- विविधा - कान्तिपुर समाचार
प्रवासमा अवैधानिक संस्थाहरु : सुनको अण्डा पार्ने कुखुरी !
श्रावण ९, २०७६ मेघराज सापकोटा
यूएई — वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु पराई देशमा बसेर किन राजनीतिमा सक्रिय हुन्छन् ? किन सयौँ सामाजिक संस्था खुल्छन् ? अथवा एउटा देशमा एउटै साझा संस्थामा नेपालीहरू किन अटाउन सक्दैनन् ? नेपालका साना ठुला हरेक दलले नेपालीलाई कानुनको जोखिम मोलाएर प्रवास शाखा किन खोल्छन् ? यी प्रश्नको उत्तर गहिरो ढङ्गले खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
जहाँ जहाँ नेपाली छन् । त्यहाँ त्यहाँ संस्था खुलेकै छन् । भनिन्छ १० जना नेपाली एक ठाउँमा भेला भए भने कुनै न कुनै संस्था खोल्छन् । र, ती संस्थाहरू खास गरी राजनीतिक र गैर राजनीतिक गरी २ किसिमका हुन्छन् ।
मध्यपूर्वका हरेक देशमा राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू छन् । ती राजनीतिक संस्थाहरू हुन् । विभिन्न नाम गरेका प्रदेश स्तरीय, जिल्ला र गाउँ स्तरीय सामाजिक संस्थाहरू, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार र सहकारी संस्थाहरू खुलेका छन् । ती गैर राजनीतिक संस्थाहरू हुन् । सहयोग समाजको नाममा खुलेका राजनीतिक भातृ संस्था हुन वा गैर राजनीतिक संस्था हुन् । ती सबै संस्थाहरू स्थानीय कानुन विपरीत छन् । ती सङ्गठनका गतिविधिहरू गैर कानुनी छन् ।
यूएईमा कम्तीमा ७० वटा भन्दा बढी नेपाली संस्था रहेका छन् । कतारमा १००, ओमानमा ३०, साउदीमा ७०, कुवेत र बहराइनमा ५० भन्दा बढी नेपाली संघसंस्थाहरु क्रियाशील छन् । त्यसै गरी इजिप्ट, इजराईल, इराक, लेबनानमा पनि नेपाली संस्थाहरू खुलेका छन् । मलेसियामा त झन् धेरै संस्थाहरू छन् । अवैधानिक संस्था त खोलेकै छन् । त्यसको नेतृत्वमा जान अनेकन तिकडम र झगडा गर्छन् ।
अस्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकामा नेपालीका अनगिन्ती संस्थाहरू सक्रिय छन् । पश्चिमी देशमा केही संस्थाहरू कानुनी रूपमै दर्ता भएर आफ्नो क्रियाकलाप गर्दछन् । अधिकांश देशमा यी संस्थाहरूले गैरकानूनी रूपमा लुकिछिपी आफ्ना कामहरू गर्ने गर्दछन् । यो संख्यालाई हेर्ने हो भने यस्तो लाग्छ कि नेपालीहरू संस्था नभई बाँच्नै नसक्ने भएका छन् । नेता नभई हाँस्नै नसक्ने भएका छन् । संस्थाका प्राय नेतालाई हरेक शुक्रवार घाँटीमा खादा र ब्याच नलगाएमा साप्ताहिक छुट्टी पनि खल्लो लाग्न थालिसक्यो । नशा नशामा नेतागिरी छ । संस्था खोल्नु र त्यसको नेता हुनुमा गर्व गर्छन् ।
नेपालमा रहेका सानाठुला सबै पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू प्राय सबै देशमा खुलेका छन् । भूमिगत वा अर्धभूमिगत रूपमा आफ्ना गतिविधीहरु सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकारसँग कार्यक्रमको अनुमति लिँदैनन् । अनुमति मागे पनि पाइँदैन । भातृ सङ्गठनले होटेलमा पार्टीको झन्डा टाँगेर खुलेआम अधिवेशन गर्छन् । बेलाबेला प्रशिक्षण कार्यक्रम हुने गरेका छन् ।
दुईवर्ष अघि यूएईस्थित नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन जनसम्पर्क समितिको अधिवेशनमा नेता शंशााक कोइरालासहित नेपाली कांग्रेसको ठुलो टोली दुबई आयो । तामझामका साथ अधिवेशन गरियो । तत्कालीन एमाले निकट प्रवासी मञ्च र माओवादी केन्द्र निकट जनप्रगतिशील मञ्चका विभिन्न कार्यक्रममा नेपाली नेताहरू पटक पटक सुटुक्क यूएई आउँथे । केही महिनाअघि मात्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कमल थापा निकट भातृ सङ्गठनको अधिवेशनको लागि सांसद राजेन्द्र लिङ्देन लगायतको टोली यूएई आएर गए ।
विभिन्न समाजका नाममा खोलिएका संस्थाले गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रमले गर्दा कुनै साप्ताहिक छुट्टीले खाली बस्नु पर्दैन । सामाजिक संस्थाले नेपालबाट कलाकारहरू बोलाएर अधिवेशन सँगसँगै सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने गर्दछन् । अधिकांश सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू स्थानीय निकायको अनुमति र जानकारी बिना नै हुने गरेका छन् ।
सांस्कृतिक कार्यक्रममा अवैध रूपमा टिकट बेचिन्छ । यस्ता कार्यक्रम गर्न स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति मागेर निश्चित शुल्क तिरेर मात्र बारकोड सहितको टिकट बेच्न पाइन्छ । बेचेको हरेक टिकटको तोकिएको कमिसन शुल्क सरकारलाई तिर्नु पर्दछ । तर यहाँ जसले जति पायो उति टिकट छापिदिन्छन् । उति नै बेचिदिन्छन् । तालपरे खल्ती पनि भरिदिन्छन् ।
कार्यक्रम गर्नुअघि आयोजकले स्पोन्सर खोज्ने गर्दछन् । पहुँच र रवाफको भरमा व्यवसायीबाट पैसा उठाउने गरेका छन् । स्पोन्सरलाई आयोजकले उनीहरुकै मनमर्जीमा पैसा तोक्छन् । र, दिन बाध्य पारिन्छ । कार्यक्रम सकिएपछि भने नेपालमा आपत् विपत् परेकालाई सहयोग गरेको नाटक मञ्चन गरिन्छ । थोरैले मात्र आयव्यय सार्वजनिक गर्छन् । अर्थात् यी संस्थाका केही नेतालाई सामाजिक कामको नाममा पैसा कमाउने माध्यम बनेको छ ।
राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन खुल्नुमा दुईवटा कारणलाई मान्न सकिन्छ । एउटा, नेपालका पार्टीहरुको स्वार्थ । अर्को नेता बन्न विदेश पुगेका कार्यकर्ताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ । यी भातृ संगठनहरुले नेपालका पार्टीहरुलाई नियमित लेबी तथा चन्दा बुझाउने गरेका छन् । यिनीहरू पार्टीको आर्थिक स्रोत हुन् । त्यो बाहेक भातृ संगठनहरुको अधिवेशन तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा नेपालका नेताहरूले नि:शुल्क विदेश भ्रमण गर्न पाउनेछन् ।
बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा विदेश गएका आफ्ना कार्यकर्ताहरुको संरक्षण गरी वैचारिक विचलन हुनबाट रोक्न पनि पार्टीले भातृ सङ्गठनलाई मान्यता दिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा रहेको उनीहरूको परिवारको भोटबैंक सुरक्षित हुने पार्टीहरुको विश्वास छ । जस्तो कि, एउटा कार्यकर्ता विदेश पलायन भयो । नेपालको वर्तमान अवस्थामा उबाट कम्तीमा ५ जना परिवार सङ्ख्या आश्रित छन् । ती ५ जनाको भोट सुरक्षित हुने भयो ।
विदेशमा भातृ सङ्गठन खोल्नुले केही नेताहरूलाई कालो धनलाई सेतो बनाउने माध्यम पनि बनेको छ । केही नेताहरूले तिनै कार्यकर्ता मार्फत नेपालको कालो धनलाई हुन्डी मार्फत विदेश पुर्‍याएर सेतो बनाएर नेपाल फिर्ता ल्याउने गरेको पाइन्छ । तसर्थ पनि पार्टीका ती नेताको लागि विदेशस्थित भातृ सङ्गठन अपरिहार्य छ ।
नेपालका अधिकांश जनता विचारले कुनै न कुनै पार्टीमा आस्थावान छन् । अझ भनौ हरेक नेपालीहरू सामाजिक भन्दा पनि बढी राजनीतिक प्राणी हुन् । नेपालमा राजनीति गर्ने बानी परेका उनीहरू फर्केर गएपछि पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित पार्न चाहन्छन् । स्वदेशमा भन्दा विदेशमा रहेर नेपालका नेताहरुसँग सम्पर्क स्थापित गर्न र सम्बन्ध बढाउन सजिलो पनि छ । उनीहरुमा कुनै नेताको अघि पछि गर्न पाए ठुलो मान्छे भइने रहरले पनि काम गरेको हुन्छ ।
केन्द्रीय स्तरका नेताहरुसँगको हिमचिमले समाजमा इज्जत बढ्ने, साख चौडा हुने बुझाई छ । साथै आन्तरिक र अन्य बाहृय संगठनसँगको इगो पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । भातृ सङ्गठनमा जोडिनुको अर्को राम्रो पक्ष भनेको आफ्नो आस्था र विचारलाई जीवित राख्नु हो । बेला बेलामा हुने गरेको राजनीतिक कार्यक्रम र प्रशिक्षणले उनीहरुमा रहेको राजनीतिक चेतना अझ बढ्ने र प्रखर हुने सम्भावना रहन्छ । व्यक्तिगत रूपमा आफू नेता बनेर पाउने शान, सम्मान र सन्तुष्टि त छदैछ ।
राजनीतिक मात्र होइन । विदेशमा गैर राजनीतिक सामाजिक संस्थाहरू खुल्नुमा पनि यिनै कारणहरू हुन् । समाजसेवाको नाममा आफ्नो शान मान त बढ्ने नै भयो । कलाकारहरुलाई त झन् फाइदै फाइदा छ । विदेश घुम्ने अवसरदेखि पैसा कमाउने भनेको नै विदेशमा हुने गरेका कार्यक्रमबाट हो । नेपालमा गीत गाएर र भिडियो रेकर्डिङ गरेर लगानी उठ्न सक्दैन । कुनै एक गीत हिट भए सोही गीत विदेशमा गाएर लाखौँ कमाउन सकिन्छ । दुईचार पटक खाडी र मलेसिया गएर गीत गाउन पाए अमेरिका र युरोपमा भिसा पनि सजिलै लाग्छ । राष्ट्रिय स्तरका कलाकारसँगको हिमचिमले आयोजक नेताको नाक उँचो हुन्छ नै । त्यस कारण नेपाली कलाकारको लागि विदेशमा खुलेका नेपालीका अवैधानिक संस्थाहरू सुनको अण्डा पार्ने कुखुरी नै साबित भएका छन् ।
विदेशमा हुने धेरै नेपालीहरू सहकारीमा जोडिएका छन् । १०/१५ जना नेपाली मिलेर मासिक सय दिर्हाम उठाउने गर्छन् । आन्तरिक रूपमा २० प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्ने गरेका छन् । यसले अभर परेको बेला उनीहरूको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्दछ । नेपालीका केही सहकारी कोषमा अहिले पनि लाखौँ रुपैयाँ छ ।
विदेशमा भासिएका अधिकांश पत्रकारहरु पनि आफ्नो संस्थामा जोडिएका हुन्छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ अन्तर्गत मात्र अहिले सम्म ८ वटा वैदेशिक शाखाहरु क्रियाशील छन् । उनीहरू प्राय सामाजिक पत्रकारिता गरिरहेका हुन्छन् । नेपालबाट नियुक्ति लिएर तलब थापेर समाचार सम्प्रेषण गर्ने अत्यन्त थोरै पत्रकार छन् । प्राय उनीहरू स्थानीय निकायको निगरानीमा हुन्छन् । रैपनि लेख्न भने छोडेका छैनन् ।
यी देशहरूमा समाजसेवा वा कुनै पनि गतिविधि गर्नको लागि वैधानिक रूपमा संस्था दर्ता गर्न जरुरी छ । राजनीतिक संस्था त सधैँ अवैधानिक नै हुन्छन् । यूएई सरकारले ती अवैधानिक संस्थाहरुलाई पटक पटक दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । तर पनि कोही पनि दर्ता प्रक्रियामा जान सकिरहेका छैनन् । अर्कोतिर संस्था खोल्न जति सजिलो छ, त्यसलाई चलाउन उत्ति नै गाह्रो हुन्छ । संस्था खोलेर पनि घरभाडा, मसलनन्द खर्च, टेलिफोन, बिजुली बत्ती, कर्मचारी खर्च धान्न सजिलो छैन । यी संस्थाको नेतृत्वमा रहेका न्यून आय भएका नेपालीले यी सबै खर्च जुटाउन पहुँच पुग्दैन । पहुँच पुग्नेहरु, आर्थिक रूपमा सबल नेपालीहरू यस्ता संस्थामा जोडिन मन गर्दैनन् । तसर्थ पनि नेपालीहरू लुकिछिपी अवैधानिक तरिकामै रमाउँछन् ।
पछिल्ला दिनमा खाडी मुलुकहरु लगायत मलेसियाले यस्ता गतिविधिमा निगरानी बढाएको छ । मलेसियाले गत महिना मात्र साङ्गीतिक कार्यक्रममा हस्तक्षेप गरेर कलाकारसहित आयोजकलाई नियन्त्रणमा लिएर नेपाल पठायो । ती कलाकारले झन्डै महिना दिन डिपोर्टटेशन सेन्टरमा बिताउनुपर्‍यो । यूएई लगायत खाडीका अन्य मुलुकहरूमा पनि अनुमति नलिई गरिने यस्ता कार्यक्रमहरूको जोखिम बढ्दो छ । राजनीतिको ‘र’ सुन्न नचाहने यी मुलुकमा राजनीतिक गतिविधिमा अझै कडाइका साथ निगरानी बढाएको पाइन्छ ।
तसर्थ हामी जो जुन देशमा छौँ । त्यो देशको कानुन ‘ल अफ ल्यान्ड’ लाई सम्मान गर्नु पर्दछ । अवैधानिक हुने गैरकानूनी क्रियाकलाप गरिरहे अवश्य एक दिन अप्ठेरोमा परिने निश्चित छ । प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ २०:०३
[ब्लग] खाडीमा मृत्यु : कारण के, दोषी को ?
वैशाख २६, २०७६ मेघराज सापकोटा
यूएई — दुई महिना पहिले दुबईमा एक नेपालीको मृत्यु भयो । मृत्यु प्रमाणपत्रमा उनको मृत्युको कारण 'प्राकृतिक' भनेर लेखियो । उनको मृत्युको वास्तविक कारण थियो- 'ब्रेन हेम्रेज' । उनी बाथरूम गएको बेला बाथरूम भित्रै ढले । बाथरूमबाट किन बाहिर आएनन् भनेर हेर्न जाँदा अर्धचेत अवस्थामा भेटिए ।
यूएईको एक प्रतिष्ठित कम्पनीमा राम्रै पदमा उनी कार्यरत थिए । जब उनी बाथरूममा ढलेको थाहा भयो, साथीहरु भेला भएर अस्पताल पुर्‍याए । डाक्टरहरुले 'ब्रेन हेम्रेज' भएको पत्ता लगाए । तुरुन्त अपरेसन गरे पनि उनलाई बचाउन सकेनन् । डाक्टरहरुको अथकप्रयास ब्यर्थ भयो । पाँच दिन पछि उनलाई मृतको घोषणा गरियो ।
एक हप्ता पछि शवलाई नेपाल पठाइयो ।
नेपालमा मृतककी श्रीमतीसहित एक छोरा छन् । उनको श्रीमती बेलाबेला दुबई आउने जाने गर्थिन् । त्यसो त मृतक उच्च रक्तचापका रोगी पनि थिए । नेपालमै रहे पनि श्रीमती उनलाई नियमित औषधी खान सम्झाउँथिन् । उनी भने नियमित औषधि खाँदैन थिए । उनले औषधि नखाएको महिनौं भएको थियो ।
नेपाली दूतावास अबुधाबीका अनुसार यूएईमा गतवर्ष एकसय तीन जना नेपालीको ज्यान गयो । जस मध्ये ५२ जनाको मृत्युको कारण प्राकृतिक छ । प्राकृतिक भनेको यसरी बुझौं कि उनीहरु मध्ये धेरैको सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भयो ।
दिनभर काम गरेर बेलुकी खाना खाएर सुतेकाहरु बिहान उठेनन् । मृत्यु हुने मध्ये आधा (५० प्रतिशत) भन्दा धेरैको मृत्यु यसरी भएको मेडिकल रिपोर्ट दूतावाससँग छ ।
उनीहरु किन सुतेको सुतै भए ? बिरामी नभइ किन मृत्युवरण गरे ? बेलुकी सद्दे सुतेका बिहान किन उठ्न सकेनन् ? खाडीमा यस्तो मृत्यु किन बढी हुन्छ ? अध्ययनको विषय बन्नुपर्ने हैन र ? यसको खोजिनीति कसैले गरेको छैन ।
परदेशले त खोजिनीति गरेन । कम्तीमा नेपालले त सोधिखोजी गर्नुपर्छ । ‘मेरा नागरिक तिम्रो मुलुकमा किन सुतेको सुतै हुन्छन् ?’ भनेर अहिलेसम्म पनि सोधेको छैन ।
प्राकृतिक भनिएको यस्तो मृत्यु हुनुमा सामान्यतया असाध्यै गर्मी कारण हो भनिन्छ । दिनभरी ५० डिग्रीमा काम गर्नेहरु राति १५—२० डिग्रीको चिसो एयर कन्डिसन भएको कोठामा सुत्छन् । यही कारणले पनि शरीरको सन्तुलन बिग्रिन्छ र, मृत्यु हुन्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ ।
अध्ययन गर्नुपर्ने अर्को विषय–विदेशमा कार्यरत धेरै नेपालीहरु सुगर (चिनी) रोगले पनि पीडित छन् । धेरैजना रगतमा उच्च कोलेस्ट्रोल बोकेर पनि बाँचेका छन् । जसले गर्दा अधिकांशमा उच्च रक्तचाप (हाई ब्लडप्रेसर) रहेको छ । किन होला ? कसैले सोधेका छैनन् ।
खाडीका धेरै नेपालीहरु घरपरिवारको चिन्ता बोकेर काम गरिरहेका हुन्छन् । वैदेशिक रोजगारीले धेरैको परिवारमा झगडा निम्त्याएको छ । आजकाल नेपालमा कोही महिलाको हत्या भयो भने वा बलात्कारको घटना भयो भने उनीहरु मध्ये अधिकांशका श्रीमान् विदेशमा रहेको सुनिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालको जमानामा नेपालमा श्रीमतीको मती बिग्रेको खाडीमा श्रीमानले थाहा पाएको हुनसक्छ । कम्पनीले भनेको बेला छुट्टीमा जान दिन्न । छोडेर जाँदा पनि आर्थिक अभावको जिन्दगी जिउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै तनावले उसले रातदिन रक्सी सेवन गरेर मन बाँधेको हुनसक्छ । अनि रक्तचाप बढ्दैन त ? बढ्ने नै भयो ।
तनाव व्यवस्थापन गर्न नसकेका मध्ये केहीले आत्महत्याको बाटो रोजेका हुन् । यो वर्ष मात्रै यूएईमा ३१ जनाले आत्माहत्या गरे । आत्महत्या गर्नेहरु मध्ये २ जना महिला छन् ।
१८ जना नेपालीको दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । बाटो काट्दा सावधानी नअप्नाउने, ट्राफिक सिग्नलको पालना नगर्नाले धेरैको मृत्यु हुने गरेको देखियो ।
नाम मात्रको अभिमुखीकरण तालिमको खुल्लमखुल्ला प्रमाणपक्र वित्री हुनुको कारण विदेशमा दुर्घटना भएर नेपालीहरु मरिरहेकाछन् भन्दा अतियुक्ती हुँदैन । अभिमुखीकरण तालिम आखिर यस्तै कुराहरु सिकाउ हैन ? अधिकांश यस्ता तालिम सेन्टर प्रमाणपत्र बेच्ने नांग्लो पसलभन्दा कम छैनन् । यसैको परिणाम हो विदेशमा दुर्घटनामा पर्ने नेपालीहरुको संख्या बढ्दै गएको छ ।
विदेशमा मृत्यु भएमा लाश नेपाल पठाउन पनि निकै कठिन छ । कम्तीमा एक हप्तादेखि महिनौं पनि लाग्न सक्छ । त्यो बीचमा परिवारले भोग्ने पीडा तपाईं हामीले अनुमान पनि गर्न सक्दैनौं ।
तसर्थ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका हरेक नेपालीहरुले आˆनो ख्याल आाफैं गर्न जरुरी छ । यसको रोकथाम तथा न्यूनिकरण भनेको सचेतना नै हो । सबैजना सचेत बनौं ।
(सापकोटा युएईमा कार्यरत छन् ।)
प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ १४:०५